Biko jiri mpempe kọntaktị anyị
Anyị ga-alaghachikwute gị ozugbo enwere ike!
Maka ajụjụ a kapịrị ọnụ na ozi ndị ọzọ ị nwere ike ịbịakwute anyị ebe a: </a>
Ndepụta: + 49 2131 4058 629
Anyị na-agbachitere ikike mmadụ n’isi ụlọ ọrụ anyị. Gaa leta anyị na Berlin. Ndị na-eche nche 71 - 101
adreesị ozi-e (achọrọ)
Ihe PixelHELPER | plastic arts na Wannsee Berlin, Germany
Anyị na-alụ ọgụ maka ụwa ka mma
Daalụ maka mmasị gị na PixelHELPER. Ndị na-arụ ọrụ ugbo mmadụ na-ekele gị maka nleta gị. Anyị na-eji ígwè ọrụ 4 mita ígwè kee ndị na-enye anyị aka. Ọ bụrụ na ị kpebie ịkwado anyị, ị nwere ike ịnweta robot dị ka onyinye. Nnukwu ihe oyiyi bụ ezigbo ọrụ nke nkà. Dị ka nnukwu plastik nke edere akwụkwọ, ị nwere ike ịbanye n'ọdụ ụgbọelu ọ bụla, ụlọ ahịa ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ ọta akara. Ya mere, ọ bụrụ na ị nwere ihe pụrụ iche ịgwa anyị, ma ọ bụ ga-achọ inye onyinye na nzukọ anyị, anyị na-atụ anya igosi gị ọrụ nke ọrụ anyị. Onye egwu egwu Oliver Bienkowski na ndị otu ya wuru 4 Meter ogologo nnukwu ihe oyiyi iji mee ka ụmụ na-achị ọchị ma nwee ihe ijuanya. Anyị Youtube kpakpando Jörg Sprave wuru a ifuru osimiri obi ụtọ catapult. Ihe niile si na ihe oyiyi ahụ na-aga ọrụ ebere anyị. Daalụ maka ịkwado anyị.
Kpọtụrụ January 9th, 2020Oliver Bienkowski